Dad kasoo barakacay duqeymaha US ee Sh/Hoose | KEYDMEDIA ONLINE
28 October 2021 Shirka Golaha Wasiirrada oo caawa ka dhacaya Guriceel
28 October 2021 Mareykanka oo askar u tababarey Koonfur Galbeed
28 October 2021 Hadda ma ku habboon tahay in AMISOM baxdo?
28 October 2021 Dagaal ka dhacay Gobolka Jubbada Hoose [Fahfaahin]
28 October 2021 Sh. Shaakir: Hub iyo Ciidan Muqdisho laga keenay baa lagu dumiyay Guriceel
28 October 2021 Galmudug oo wariye ku xirtay Guriceel
28 October 2021 Maxaa ka jira in Puntland ay hub siisay Ahlu Sunna?
27 October 2021 Kenya oo ka cabsi qabta weerarro argagixiso
27 October 2021 RW Rooble oo amar dul-dhigay hoggaanka iyo saraakiisha NISA
27 October 2021 Sidee ku gabbel-dhacsaty degmada Guriceel?
27 October 2021 Muxuu yahay buuqa ka taagan Golaha Degaanka Baraawe?
27 October 2021 Faah faahin laga helayo dil ka dhacay Muqdisho
27 October 2021 Hoos u dhac ku yimid kiisaska COVID-19 ee Soomaaliya
27 October 2021 Maxay ka dhigan tahay ka bixitaanka Ahlu Sunna ee Guriceel?
26 October 2021 Beesha Caalamka oo war ka soo saartay xaaladda Galmudug
Dad kasoo barakacay duqeymaha US ee Sh/Hoose
Duleedka Muqdisho xeryo barakacayaal ku yaalla waxaa soo gaarey magaalihii lasoo dhaafay boqolaal qoys oo sheegay inay kasoo carareen duqeymaha Mareykanka.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidanka Mareykanka ayaa si aan kala sooc lahayn u duqeeya shacabka iyo Al-Shabaab marka ay howlgallada ka fulinayaan gobolka Shabeellaha Hoose, taasoo ka dhalatay dhimasho, dhaawac iyo barakac.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafayay soo gaarayey duleedka Muqdisho qoysas badan oo kasoo barakacay gobolka, kuwaasoo qaarkood u sheegay Keydmedia Online inay kasoo carareen duqeymaha diyaaradeed ee militeriga Mareykanka.
Waxay sheegeen in diyaaradaha drones-ka ay laayeen dad iyo duunyo, islamarkaana ay kusii noolaan waayeen cabsida iyo argagaxa joogtada ah, waxayna go'aansadeen inay ka barakacaan guryahooda, oo ku noolaadaan xeryahah barakacayaasha duleedka Caasimadda.
Militeriga Mareykanka ayaa mudo 13 sano ah Howlgallo duqeymaha ah ka fulinaya gudaha Soomaaliya, kuwaasoo khasaarooyin isagu jira dhimasho iyo dhaawac kasoo gaarey shacab aan waxba galabsan, halkan ka akhriso Warbixin Keydmedia Online ka diyaarisay.
Ma jirto cid kula xisaabtanta Ciidamada shisheeye dhibaatooyinka iyo xad-gudubyada ay shacabka Soomaaliyeed u geysanayaan, iyadoo dalka dawladda ka jirta ay noqotay mid indhaha ka daawata waxyaabaha dalka ka dhacaya.
0 Comments Topics: africom alshabaab drones duqeymaha mareykanka
Warbixin 28 January 2021 10:30
Waxaa lagu sifeeyey inuu yahay shaqsiga ugu saameynta badan Soomaaliya xilligan, waana gacanta-midig ee Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Nin is-qariya sidii Axmed Godane, waa taariikhda aabaha Argagixisadda Soomaaliya.
Fahad, Farmaajo & Shabaab
Wada shaqeynta Shabaab iyo Farmaajo
Maqaallo 16 November 2020 7:50
Farmaajo oo xaraashaya shidaalka Soomaaliya
Warar 28 October 2021 17:40
Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo wafti uu hoggaamin doono ee xubnaha Guddiga Batroolka, ayaa la rumeysan yahay in ay maalmaha soo socda ka ambabaxaan Muqdisho, si u soo xaraashaan xirmooyinka shidaalka Soomaaliya.
Maxaa la gudboon hoggaanka Galmudug iyo ASWJ?
Boob lagu hayo Dhulka Danta-Guud ee ku yaalla Muqdisho
CXD oo si buuxda ula wreegay Guriceel
Dagaalka Guriceel oo saameyn ku yeelan kara Ciidanka Danab